Urhulumente waseJamani wandise imali yokulondolozwa kwezilwanyana zasendle eTanzania
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Xanduva » Urhulumente waseJamani wandise imali yokulondolozwa kwezilwanyana zasendle eTanzania
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel
Ummeli waseJamani eTanzania u-Regine Hess
KwiTanzania yanamhlanje, iindawo ezikhuselweyo zokulondolozwa kwamahlathi kunye nezilwanyana zasendle zenza iipesenti ezingama-29 zomhlaba. Iipesenti ezili-13 zelizwe zibekelwe bucala iipaki zesizwe kunye neendawo zolondolozo lwezinyamakazi ukulungiselela ngokukodwa ushishino lwabakhenkethi.
Urhulumente waseJamani wandise inkxaso yakhe yezemali kunye nezobuchwephesha ekuxhaseni ngezilwanyana zasendle kunye nolondolozo lwendalo eTanzania ngentsebenziswano phakathi kwamazwe amabini amaqabane emveli kuphuhliso lokhenketho.
Xa kuphawulwa iminyaka engama-XNUMX yenkululeko yayo, iTanzania iyaqhubeka nokufumana inkxaso-mali evela eJamani kulondolozo lweepaki zezilwanyana zasendle eziphambili nezingoyena ndoqo kwezokhenketho.
Njengeqabane elikhokelayo kulondolozo lwasendle, urhulumente waseJamani utyikitye isivumelwano se-Euro 25 yezigidi sokuxhasa ngezimali uphuhliso oluzinzileyo lweprojekthi ye-ecosystems eTanzania.
Iipaki zeSizwe zaseTanzania zithe kwingxelo yakutshanje ukuba isivumelwano esityikityiweyo siza kubandakanya iiprojekthi zolondolozo lwendalo e-Katavi nase Mahale ecosystems kwi-Southern Highlands nakwiisekethe zabakhenkethi zaseNtshona zaseTanzania.
Iprojekthi yolondolozo iya kubandakanya iSerengeti Inkqubo yoLondolozo loPhuhliso lweNdalo (SEDCP II). Eminye yemisebenzi eya kwenziwa eSerengeti yomeleza ulondolozo lwezixhobo zendalo apho.
Urhulumente waseJamani uzibophelele ekuxhaseni iipaki ezintlanu ezisandula ukusekwa zolondolozo lwezilwanyana zasendle kunye nophuhliso lokhenketho eTanzania naseAfrika.
Kutshanje, kugxilwe kwintsebenziswano phakathi kweJamani neTanzania kukhuseleko lweePaki zeSizwe zaseMahale neKatavi kunye nepaseji yazo.
ISerengeti National Park kunye neSelous Game Reserve zibalulekile kwaye zikhokelela kwiipaki zezilwanyana zasendle eAfrika phantsi kwenkxaso yolondolozo lwaseJamani.
Ngo-1958 uNjingalwazi Grzimek kunye nonyana wakhe uMichael baqala izifundo zabo zokuqala ngezilwanyana zasendle eSerengeti kunye ne-documentary yabo ethi “Serengeti Shall Not Die”.
ISerengeti ngoku yindawo ekhuselweyo yezilwanyana zasendle eAfrika.
UDale N Bickenbach uthi:
NgoSeptemba 20, 2021 kwi-13: 41
Inqaku lihle kakhulu. Emva kokwenza ukhenketho lweSerengeti ndizifumene ndinombono wokuphindaphindwa kwamandla elanga kunye nokuhlaziywa kunokubukela ezinye izilwanyana ezinyamekela ishishini lazo. Ukusukela oko kwakusenziwa ubuvulindlela e-Deutschland kunye nenkqubo yokumodareyitha ephucukileyo eMntla Melika ithemba lam ibikukususa ngandlela ithile ukusetyenziswa kwefosili eSerengeti, naseTanzania ngokudibanisa obona bugcisa betekhnoloji yanamhlanje ngelixa kugcinwa imeko ehambelana nezilwanyana ezanyisayo kunye nabakhenkethi. Abafowunelwa abanomdla baya kuthakazelelwa. Enkosi.